Wholesale GQ-SN Flash Seeting Admixture - Liquid (Alkali-yemahara) fekitori uye vagadziri | Gaoqiang
GQ-SN imhando yemvura nyika kongiri yekuwedzera. Chinhu chikuru cheGQ-SN isodium aluminate. Iko kusanganisa kunoshandiswa kunyanya kwekrete yakasaswa; inogona kumhanyisa kuomesa maitiro ekongiri zvakanaka, uye ine zvakanakira yakaderera guruva density, yakaderera kusimba, yakakwira-refu-simba simba, nezvimwe.
1 Kukurumidzisa kuomesa kwekongiri zvakanaka. Inogona kuita yekutanga nguva yekumisikidza isingasviki mashanu min uye yekupedzisira yekumisikidza nguva isingasviki gumi min.
2 Zvinobudirira kuwedzera simba rekutanga, uye hapana mhedzisiro kusimba renguva refu.
3 Kudzikama kushoma mukushandiswa kweiyo chikamu chekongiri.
4 Tiki yakawedzera, inogona kugadzirisa seepage yemvura.
5 Takaneta kunzwisisika kweiyo polycarboxylate mvura-inoderedza kune zvakasvibirira, kushandiswa kwemvura uye chipimo chemushonga.
Cementitious zvekuvakisa zvekuvakisa, kunyanya zvinokurudzirwa kutanga-simba simende kuvaka, senge kumwaya dhaka, chakasaswa kongiri, plugging kongiri, tunnel lining kongiri, nezvimwe.
Unyanzvi Dhata / Chaiwo Zvivakwa
Kuwandisa / (g / cm3), 22 ℃
Chloride zvemukati / (%)
Alkali zvemukati / (%)
*Izvo zviri pamusoro chaiwo zvivakwa hazviite izvo zvinongedzo zvechigadzirwa.
Chipimo chemushonga: Muyero wakakurudzirwa ndi6.0-8.0% pahuremu hwekusunga zvinhu. Iyo inoshanda dosi inofanirwa kuve zvichibva pasimende mhando, nharaunda tembiricha, mvura simende ratio, simba giredhi, kuvaka tekinoroji uye chirongwa chinodiwa. Zvinokurudzirwa kuti iwe unofanirwa kuyedza mashandisiro uchishandisa mbishi zvinhu panzvimbo.
Usage: Isa zvinhu zvinosanganisa cementitious zvinhu kupinda injector, akisarareta inowedzerwa mune kamwene. Simende yemvura reshiyo inokurudzirwa 0.33-0.40 yevhu, 0.38-0.44 yekongiri, uye kuve nechokwadi chekumwaya dhaka kana kongiri kwete kuyerera, yakachena ruvara.
Pasuru uye Kuchengetedza
Pasuru: 200kg / dhiramu, 1000kg / IBC kana pakukumbira.
Kuchengetedza: Yakachengetwa mudura rakaomeswa yekuchengetera ye 2-35 ℃ uye yakarongedzwa isina kugadzikana, isina kuvharwa, pasherufu hupenyu hwave makumi mapfumbamwe mazuva. Inokodzera isati yashandiswa kana ikapfuura pasherefu hupenyu.
Iri pepa rinongoreva chete asi haritauri kuti rakakwana uye harina chisungo. Ndokumbirawo muenderere mberi kuyedza yayo kushanda.
Pashure: GQ-210 Ekutanga Simba Remagetsi Agent
Zvadaro: Cellulose Ether HPMC yekupurasita / Concrete / Grout seMvura-Yekuchengetedza Mumiriri
Cellulose Eteri HPMC kuti varinamire / Concrete / Gr ...